Somaliland.Org » Qormadii 3aad, Ee Macna Yare Mulac Dabe Mallaay Xadhig Ku Xidhe
OPINIONQormadii 3aad, Ee Macna Yare Mulac Dabe Mallaay Xadhig Ku Xidhe
March 29th, 2008 Comments Off Waa Qormadii 3aad, ee macna yare mulac dabe mallaay xadhig ku xidhe. Kudhac kalsooni iyo ku bad-baaddid. Axmed Siilaanyo waa nin geesi ah Eebbena ku kaalmeeyey kalsooni.
Wuxuu ka soo gudbey waqti adag iyo askar waddan aanay maamuli aqoon inqilaab ku qabsatay. Waa ayaan darro isagoo aqoon iyo aragti fog oo uu dal iyo dadba rajo iyo rabaddin ugu sahaminayey in laga doorto kii dirqi iyo tuxun kaga baxsaday halgankii uu hogaamin jirey ee SNM.
waxay ahayd waqti cabsida kacaanku la’ soo baxdo qorraxda aroortii oo aad loogu werdiyo ninka la sheego inuu Siyaad Barre eray ku celiyo.
Wuxu ahaa Siilaanyo ragga ugu horeeyey ee quudhsiga iyo qalooca siyaad Barre diidey.
Waxanay si qayaxan iskaga hor yimaadeen Jaalle Siyaad dhacdadii dhexmartay Siilaanyo, Siyaad Barre, iyo Cas-casey-gii Kismaanyo xeertay.
wuxuu ahaa Siilaanyo wasiirka ganacsiga wuxuna ka soo bedeley Kismaanyo Cas-casey isagoo amray inuu maalinta caynkaas ah iska xaadiriyo xarunta wasaaradu ku leedahay Beydhabo waxanuu ahaa bedelku mid aan ka duwanayn kuwii caadiga ahaa ee shaqaalaha. Qaadanwaa iyo lama filaan bay ku noqotay Cas-casey. Siyaad Barre oy yihiin Qaraaba dhaw ayuu usoo ash-katoodey isagoo ka cabanaya bedelka iyo isagoo sheeganaya inuu meesha ku xaasoobey oo ku bashiishtay oo aanu is qaadi karayn.
Jaalle Siyaad ayaa iyadoo golihii wasiirada kulan lagu lahaa kula hadlay Muj. Axmed isagoon ka filayn marnaba diidmo ayuu yidhi “Axmed waxa ii soo cawday nin oday ah ood u bedeshey Baydhabo, waxanaan ku farayaa jaalle ninku waa ku xaasoobey meesha e’ u daa halkiisaa ha kaaga shaqeeyee” Wuxuu ugu jawaabey Muj. Siilaanyo suura-gal maaha waana qalad inuu waxanoo kale kuula yimaado adna ilama fiicna inaynu ka wada hadalo arintan oo kale. iyo “haduu berri tegi waayo halkii loo diray isagaana yaqaan halkuu ku socdo”. Waa loo soo taagnaa waa markhaati madoon.
Intaan ka xasuusto waxa ka mid ahaa lama ilaawaanimadiisa aan ka bawsadey goob-joog Maxamed Xaji Ducaale (Dhoolayare) wuxu yidhi waxanu u tagnay Siilaanyo aniga iyo chief Caaqil Cali Xirsi Axmed oo kasoo kicitinnay Burco. Waxaanu ugu tagnay xafiiskiisa Xamar. waxaanu kala hadlayney arrimo ay ka mid tahay Beeyada oo dadkii lahaana gacantooda iyo geedkeeda ku ahayd kootarabaan. Halka Iislaamona loo siiyo dhibaad iyo warqado ay ku iib geeyaan oo loo yaqaaney (Nola-osto) oo uu soo bixin jirey Jaalle Siyaad.
Annagoo arrintii xoogaa wad-wadney oo badiba cabashadayadii u sheeganay Wasiirka ayaa waa bixiso e’ waxa si kedis ah noogu soo galay hal Habar ahoo hilboon oon dusha waxba ku sidan aan ahayn qoor-duub yaroo milikhsan, waxay u dhiibtey wasiirka warqad xidhan iyadoo raacisay weedh ahayd “wasiir Noola-osto waaye, madaxweynahaa so